आदिवासी जनजातिलाई गोलबन्द गर्ने ‘महासंघ’ को जन्मकथा - फ्री प्रेस नेपाल
जनजाति सशक्तिकरण परियोजनाअन्तर्गत करोडौँको आर्थिक सहयोग जुटेपछि साँघुरो छिँडीमा आश्रित महासंघ सचिवालय राम्रो भौतिक संरचनायुक्त कार्यालयमा परिणत भयो । महासंघ बैठक वा अन्य कुनै कार्यक्रममा पुग्नका लागि सार्वजनिक यातायात प्रयोगमा कमी आउँदै गयो । पदाधिकारीहरू प्राय रातो प्लेटको स्कोरपियो जीप (गाडी)मा हुइँकिन थाले ।
१४ भाद्र २०७७, आईतवार २१:०१
६२/६३ सालको आन्दोलनको क्रममा सिंहदरवार अगाडि उभिएको पृथ्विनारायण शाहको शालिकमाथि महासंघको झण्डा फहराइरहेका यूवाहरुको यो तस्वीर फोटो पत्रकार मीनरत्न बज्राचार्यले खिचेकाहुन् । उनको चर्चित तस्वीर जर्नल आवरणमा ।
पहिल्यैदेखि नेपालका शासकहरूका लागि नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय ‘जङ्गली’, ‘भूसतिघ्रे’, ‘स्वाँठ’ कहलाइएका थिए । शाहवंशीय शासनकालदेखि नै सत्तासीनहरूमा रहेको विजित जातिको अहंकार तथा व्यवहारका कारण आदिवासी जनजातिहरू चर्को विभेदमा पारिदै आए । १९१० सालको जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐनबाट कानूनतः ‘मासिने जात’ बनाइए । पछि राणाहरू सत्ताबाट विस्थापित त भए । तर, सत्ताको सोच र संवैधानिकताभित्र आदिवासी जनजातिहरू मुलुकका दोस्रो श्रेणीका नागरिक नै रहीरहे । आदिवासी जनजातिहरूसँग एकातिर ऐतिहासिक कालदेखि राज्यसत्ताबाट हुँदै आएको विभेदपूर्ण व्यवहारको पीडा थियो । अर्कोतिर आफ्नो भाषा, संस्कृति, रीति, परम्पराबाट विच्छेद र थातथलोबाट विस्थापनको चुनौती थिए ।
आदिमकालदेखि आदिवासी जनजातिहरूमा रहेको सामुदायिक चेतनाले एउटा कालखण्डमा सामूहिक प्रयासका लागि सँगै जुटे । २००७ साल पछिको खुकुलो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा थारु, तामाङ, राई, लिम्बु, नेवार, मगर आदि समुदाय सांगठनिक संरचनामा आउन थाले । तर, तत्कालीन शासकहरूको दमनकारी मानसिकता, कानूनी निरङ्कुशताका कारण त्यस्ता संगठनहरू संस्कार, संस्कृति, रीति परम्पराको संरक्षण, सम्वद्र्धन र पुनःजागरणमा मात्रै केन्द्रित थिए । नेवारका केही संगठन भाषिक चेतना र साहित्यिक गतिविधिमा मात्र सीमित रहे ।
यद्यपि, दमन र विभेदले सीमा नाघेपछि निरङ्कुश शासन सत्ताविरुद्ध पनि स्वःस्फूर्त विद्रोहका आवाजहरू उठे । पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुरमाथि चढाइ गरेको केही वर्षपछि नै त्यहाँका पछिल्लो राजा रणजित मल्लका छोरा अवधुत सिंहले वनारसबाट हतियार सङ्कलन गरी विद्रोहको थालनी गरेका थिए । सफल हुन नसकेपछि उपत्यका छाडेर उनी पर्वततिर हानिए । सन् १७०९ मा तामाङ मुर्मीहरूले गरेको खनियाबास विद्रोह इतिहासमा उल्लेख छ । त्यस्तै सन् १८०८ को चर्चित काण्ड– खम्बुवान हतुवाका अटलसिंह खम्बु सहितहरूले भीमसेन थापाको कार्यकालमा गरेको विद्रोहको आफ्नै स्थान छ । जसमा दुईजना ज्यान सजायका भागी भए र १५ जनाको सर्वस्वहरण गरियो । त्यस्तै सन् १८७० मा जङ्गबहादुर राणा विरुद्ध साहसिक आवाज उठाउने लखन थापा मगरको कदम पनि बिर्सिन सकिन्न । सन् १८७० मा सुपति गुरुङ र सुकदेव गुरुङले उठाएका विद्रोहका आवाजहरू पनि स्मरणीय छ ।
राजनीतिक रूपमै उठान भएका नेपालका आन्दोलनहरूमा पनि १९९७ सालदेखि नै आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता र निर्णायक भूमिका थियो । चाहे १९९७ साल शहादत प्राप्त गर्ने शहीदहरू हुन् (सम्वत् १९९७ सालमा शहीद भएका ४ जनाः शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठमध्ये ३ जना आदिवासी जनजाति नेवार समुदायका थिए ।) वा जनमुक्ति सेनाका नेतृत्व गर्ने नारदमुनि थुलुङ, रामप्रसाद राई आदि हुन् । २०४६ र २०६२÷६३ सालको दुवै जनआन्दोलन र माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा समेत आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता उल्लेख्य थियो । विशेषत नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन र फेरबदलहरूसँगसँगै आदिवासी जनजातिहरूको एउटा साझा तथा समन्वयकारी केन्द्रको आवश्यकता सबैले महशुस गर्दै आइरहेका नै थिए । त्यसैले अभियन्ताहरूको तर्पmबाट विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक प्रयत्नहरू गरिए । २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै आदिवासी जनजातिहरूको एक छाता संगठनको स्थापना उनीहरूको पछिल्लो सामूहिक र सांगठनिक उपलब्धि थियो । नेपाल जनजाति महासंघ (सम्वत् २०४७ मा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था ‘नेपाल जनजाति महासंघ’को नाममा स्थापना गरिएको थियो । सम्वत् २०६० को पाँचौ महाधिवेशनमा नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ’ नाम राखिएको थियो । ) को स्थापना ऐतिहासिक कालदेखिकै लामो प्रयत्न र संघर्षको प्राप्ति थियो ।
महासंघको गठन पूर्व र गठनपश्चात्को आन्तरिक पक्षहरूलाई यहाँ संक्षिप्त रुपमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । जनजाति महासंघ निर्माणको शुरुआती चरणदेखि संलग्न भएको एक व्यक्तिको रुपमा मेरा आफ्ना अनुभव र तत्कालीन क्रियाकलापहरूमाथिको मेरो बुझाइ र विश्लेषणमा यो लेख आधारित छ ।
पञ्चायतकालमा जनजाति एकता
२०३८ सालमा ‘नेपाल मातृभाषा परिषद्’ स्थापना भयो । पूर्व न्यायधिवक्ता रामानन्दप्रसाद सिंह परिषद्का संयोजक थिए । परिषद्को उद्देश्य मूलतः भाषिक अधिकार प्राप्ति तथा मातृभाषा संरक्षण थियो । सुरेश आले मगर, पद्मरत्न तुलाधर, मल्ल के. सुन्दर, सीताराम तामाङका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी भाषीका प्रतिनिधिहरू पनि परिषद्मा गोलबन्द भएका थियौँ । भाषिक समानता, भाषिक अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा नेपालमा हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा चेतना जगाउने, आपसी विचार विमर्श गर्ने काममा परिषद् लामै समयसम्म सक्रिया रह्यो । मूलतः परिषद्ले भाषिक अधिकारमा केन्द्रित रहेर राज्यको ध्यानाकर्षित गराउने भूमिका खेल्यो ।
२०४५ सालमा आइपुग्दासम्म परिषद्ले आफ्नो सोच र उद्देश्यलाई फराकिलो पार्यो । भाषिक अधिकारको साथमा जातीय मुक्तिको सवाल पनि केन्द्रमा राखियो । सम्भवतः पहिलोपटक जाति, भाषाका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सवाल त्यसबेला परिषद्मार्फत् उठाइयो । जाति र भाषिक बाहुल्यताका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने विषयलाई सार्वजनिक माग बनाइ अगाडि ल्याइयो । द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकामध्ये सबै जातीय समूहलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी माथिल्लो सदन जातीय सदन हुनुपर्दछ भन्ने परिषद्को ठहर थियो । धर्म निरपेक्षता, मातृभाषाको माध्यमबाट प्राथमिक शिक्षा, भाषिक समानताको संवैधानिक सुनिश्चितता आदि मुद्दाहरूलाई विशेष रूपमा उठाइए ।
यी मुद्दाहरू ‘सर्वजातीय अधिकार मञ्च’को नामबाट उठाइएका थिए । मञ्चको अध्यक्षमा सीताराम तामाङ र सचिवमा सुरेश आले मगर क्रियाशील रहे । वामपन्थीहरूको बाहुल्यता रहेको यो मञ्चमा शम्भुराम श्रेष्ठ, नरबहादुर कर्मचार्य, भक्तबहादुर श्रेष्ठ, शक्ति लम्साल, दिलबहादुर श्रेष्ठ, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, चन्देश्वर श्रेष्ठ, आङ्गदोर्जे लामा, पद्मरत्न तुलाधर, मल्ल के. सुन्दर आदिको संलग्नता थियो । पञ्चायती शासनको निर्ममता चर्किएको त्यस विशेष कालखण्डमा यस मञ्चको प्रत्येक गतिविधिमाथि प्रहरी प्रशासनको कडा निगरानी रहिरह्यो । पटक–पटक प्रहरी हस्तक्षेप पनि खेप्नुपर्यो ।
जनजाति महासंघको उदय
वास्तवमा, ‘नेपाल जनजाति महासंघ’को गठन माथि उल्लिखित सबै पूर्ववर्ती प्रयासहरूको परिष्कृत संस्करण थियो । आदिवासी जनजातिहरूका हक, हितमा लागिरहँदा अभियन्ताहरूबीचमा ‘अब गोलबद्ध हुनुपर्छ’ भन्ने सोच पलाउँदै गयो । त्यहीअनुरुप छलफलहरू पनि हुन थाले । काठमाडौंको ताहाचलस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आदिवासी जनतातिका केही अभियन्ताहरूबीच यसबारेमा निरन्तर छलफल गरिए । त्यस्तो गोलबद्ध गर्ने कुनै संयोजनकारी भूमिकामा रहने संस्थाको खाँचो सबैले महशुश गरिरहेको हुँदा त्यसको उपायको रुपमा एउटा साझा संगठनको अवधारणा ल्याइयो । त्यसबेला ठूलो दुविधा थियो– अहिले नेपालका आदिवासी जनजाति भनिएका समुदायहरूलाई कुन संज्ञाबाट सम्बोधन गर्ने ? थुप्रै विकल्पहरू आए । तर, अंग्रेजीमा भनिने ‘न्यासनलिटिज’ शब्द उचित ठानियो । शायद छिमेकी चीनको प्रभावले होला । त्यही अन्तिम निर्णय भयो– नेपाली भाषामा ‘जनजाति’ र अङ्गे्रजी पर्यायमा ‘न्यासनलिटिज’ । आवश्यक गृहकार्य र प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्दै २०४७ वैशाख २२ गते एउटा साझा मञ्च निर्माण भयो– ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ । महासंघको गठनमा नेपाल लाङ्घाली संघमा आबद्ध स्वर्गीय गोरेबहादुर खपाङ्गी र सुरेश आले मगर विशेष श्रेयका पात्र हुन् ।
महासंघ बनाउनका लागि आरम्भमा विभिन्न ८ आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सुरेश आले मगर (मगर समुदायको तर्फबाट), रकम चेम्जोङ (लिम्बु समुदायको तर्फबाट), परशुराम तामाङ (तामाङ समुदायको तर्फबाट), तेजराज राई (राई समुदायको तर्फबाट), राजेन्द्रकुमार सुनवार (सुनुवार समुदायको तर्फबाट), गणेशमान गुरुङ (गुरुङ समुदायको तर्फबाट), दोर्जे सुशील शेर्पा (शेर्पा समुदायको तर्फबाट) र मल्ल के. सुन्दर (नेवार समुदायको तर्फबाट)ले अ–आफ्ना समुदायको प्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरेका थियौँ । त्यसपछि २०४९ असार २७, २८ र २९ मा तीन दिनको प्रथम सम्मेलन गर्ने तय गरियो । उक्त सम्मेलन सम्पन्न हुने बेलासम्म महासंघमा थकाली, थारु, धिमाल, थामी, ह्योल्मोलाई पनि समावेश गर्न सफल भयौँ । तत्कालीन अवस्थामा महासचिव प्रणालीमा महासंघ सञ्चालन गर्ने निधो गरियो । संस्थापक आठ आदिवासी जनजातिमध्ये सुरेश आले मगर महासचिव चुनिए । त्यस लगत्तै संघीय परिषद् र सचिवालय गठन गरियो । त्यसबेला महासंघको संघीय परिषद् १४ सदस्यीय रहेको थियो ।
२०५१ जेठ १४, १५ र १६ मा महासंघको दोस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गरियो । उक्त महाधिवेशनबाट परशुराम तामाङ महासंघको नयाँ नेतृत्वमा चयन भए । त्यसबेलासम्म १४ बाट बढेर १८ सदस्यीय संघीय परिषद् बनिसकेको थियो । २०५३ जेठ २५, २६ र २७ मा तेस्रो महाधिवेशनको मिति तोकियो । महासंघको विधान परिमार्जन गर्ने प्रयास सर्वसम्मत हुन नसक्दा उक्त महाधिवेशन अपूर्ण रह्यो । मत विभाजनको अवस्था नटुङ्गिदा पुरानै सचिवालयको म्याद अर्को एक वर्ष थप गरी महाधिवेशन स्थगत गरियो । स्थगित तेस्रो महाधिवेशनलाई २०५४ जेठ २५ र २६ को भेलामार्फत् ‘विशेष महाधिवेशन’को रूप दिइयो । सो विशेष महाधिवेशनबाट परशुराम तामाङ पुनः अर्को एक कार्यकालका लागि नेतृत्वमा छानिए । त्यसबेलासम्म महासंघमा आबद्ध हुने जातीय सदस्य संस्था २२ वटा थिए ।
हाते झोलामै कार्यालय
औपचारिक तवरमा महासंघ गठन गर्यौं । तर महासंघको नाममा हामीसँग एउटा ओत लाग्ने ठाउँ पनि थिएन । सचिवालय तथा संघीय परिषद्सँग प्रतिबद्धता र दृढ निश्चयबाहेक कुनै स्रोत र साधन थिएन । संघीय परिषद्का सदस्य संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा बुझाउने सीमित रकम (लेवी) र महाधिवेशन शुल्क नै महासंघको आयस्रोत थियो । नेपाल भाषा मंकाः खलः (नेवार)को काठमाडौं, बाङ्गेमुढास्थित कार्यकक्षलाई शुरुआतको समयमा महासंघको आश्रय स्थल बनाइयो । महासचिवकै झोलाभित्र महासंघको आवश्यकीय सरसामग्रीहरू हुन्थे । तत्कालीन संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले बोक्दै हिँड्ने कालो छालाको झोलाभित्र आवश्यक कागजातहरू— बैठक पुस्तिका, लेटर प्याड, चन्दा प्याड, स्ट्याम्प प्याड र स्ट्याम्प हुन्थे । त्यही कालो छालाको झोला त्यस बेला महासंघको कार्यरत सचिवालय बनेको थियो ।
दोस्रो महाधिवेशनपछि महासंघको सचिवालय काठमाडौँको पुरानो बसपार्कको एउटा छेऊको पहिलो तल्लामा रहेको ‘नेपाल तामाङ घेदुङ’को कार्यालयमा राखियो । तामाङ घेदुङको कार्यालय दुवैले प्रयोगमा ल्याउने सहमतिमा महासंघको सचिवालय त्यहाँ सारिएको थियो । घरभाडा दुवै संस्थाले मिलेर तिर्ने गरिन्थ्यो । त्यहाँ आएपछि महासंघको आफ्नै कार्यालय स्थापना गरियो । कोठामा काठको लामो बेञ्च, साधारण खाले एउटा काठको टेबल अनि पोडरेज कम्पनीको स्टिलको दराज जोरजाम गरियो । ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ नामको एउटा साइनबोर्ड पनि महासंघको सम्पतिको रूपमा जोडियो ।
तेस्रो महाधिवेशनपश्चात् महासंघको चिनारी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पुग्न थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूसँगको सम्पर्कमा बृद्धि हुन थाल्यो । साना–ठूला वैदेशिक संस्था तथा दातृ निकायहरूबाट धेरथोर आर्थिक अनुदान जुट्न थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरूमा महासंघको संलग्नता हुन थाल्यो । यस किसिमको वाह्य सम्पर्क र सहयोगको निरन्तरतासँगै महासंघ संयुक्त राष्ट्र संघको सम्पर्कमा पुग्यो । अन्ततः नेपाल जनजाति महासंघको नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी मामिलासम्बन्धी स्थायी मञ्चको महत्वपूर्ण पदमा पुग्न सफल भयो ।
तेस्रो महाधिवेशनपश्चात् नै महासंघको संरचनाभित्र विग्रहको बीजारोपण भयो । महासंघको पदाधिकारीहरू निरन्तर विदेश यात्रामा तल्लीन रहे । त्यस्तो यात्राको आधिकारिता माथि प्रश्न उठाइन थालियो । त्यससँग आर्थिक पारदर्शिताको सवाल पनि गाँसिएर आउन थाल्यो । तत्कालीन महासचिव परशुराम तामाङ र विदेश विभाग सचिव बालकृष्ण माबुहाङबीचको विवाद प्रष्टै सतहमा देखियो । त्यस्तो विवादले महासचिव र विदेश विभाग सचिव आ–आफ्ना समर्थकहरूसहित दुई खेमामा विभाजित भएर उभिए । त्यसले महासंघको दैनिक गतिविधि र क्रियाकलापहरूमा सोझै प्रभाव पार्यो । अ–आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन वैध-अवैध तर्कहरू गरिए ।
त्यसमाथि चौथो महाधिवेशनको तिथिमिति नयाँ विवादको मुद्दा बनाइयो । तेस्रोे महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सचिवालयको समयावधि २०५७ जेठ २५ गते वैधानिक रूपमा समाप्त भएको थियो । अर्को महाधिवेशन सोही वर्ष भदौका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । तर निश्चित मिति र अन्य तयारीका सम्बन्धमा भने निर्णय गरिएको थिएन । दुई खेमामा विभाजित महासंघभित्र विवादको बीउ महाधिवेशनको मितिको मुद्दालाई बनाइयो । एक थरीले तत्कालीन अध्यक्ष, महासचिवको अनुपस्थितिमा सल्लाहकारको अध्यक्षतामा २०५७ असार ७ गते संघीय परिषद्को बैठक बोलायो । उक्त बैठकले महासंघको चौथो महाधिवेशनको मिति २०५७ साउन २३, २४ र २५ मा तोक्यो । तत्कालीन सचिवालय विघटन गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ तयारी समिति गठन गरियो । तर, संस्थापन पक्षले यो कदमको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठायो ।
विवाद चुलिँदै गएपछि ‘जनजाति विकास समन्वय केन्द्र’को पहलमा २०५७ असार २१ का दिन डा. हर्क गुरुङको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो । उक्त बैठकले सचिवालय, संघीय परिषद् तथा तयारी समितिको अस्तित्वलाई कायम राख्ने निर्णय गर्यो र महासंघको २०५७ असार ७ को बैठकले निर्णय गरेको तिथिमितिमै चौथो महाधिवेशन गर्ने मध्यस्थ उपाय निकालियो ।
चौथो महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भयो । बालकृष्ण माबुहाङको नेतृत्वमा नयाँ सचिवालय गठन भयो । महासंघको कार्यालय अनामनगरको नयाँ परिसरमा स्थानान्तरण गरियो । आपसी–आन्तरिक विवाद भने टुङ्गिएन । महाधिवेशनको आयोजना र महाधिवेशनबाट छनौट गरिएको सचिवालयको वैधतामाथिको प्रश्न अदालतसम्म पुग्यो । जसको परिणामस्वरुप महासचिव माबुहाङ नेतृत्वको सचिवालयले नेपाल तामाङ घेदुङलाई महासंघको सदस्यताबाट निलम्बन नै गर्यो । २०६० वैशाख २४ सम्म आइपुग्दा तिक्तताको स्थिति मत्थर भयो । नेपाल तामाङ घेदुङमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने वातावरण बन्यो । आदिवासी जनजातिका मामिलासम्बन्धी आफ्ना कुरा राख्न तत्कालीन महासचिव माबुहाङ राजदरबारमा राजा समक्षसमेत पुगेका थिए । जुन विवाद र आलोचना मुक्त हुने कुरै थिएन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनको सम्बन्धमा समेत आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरूबीच मतभेद देखियो र तत्कालीन महासचिव माबुहाङ राजाको शासनको समर्थनमा देखिए ।
त्यसबेला महासंघमा आबद्ध हुने जातीय संघसंस्थाहरू ४८ वटा थिए । महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्पर्कमा थप व्यापकता आयो । राष्ट्रिय तहमा आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दामा जनवकालत र दबाब सिर्जनामा निकै प्रभावकारिता देखियो । त्यस्तै आदिवासी जनजातिहरूको क्षमता अभिवृद्धि र संगठनात्मक सुढृदीकरणका लागि वैदेशिक संस्थाहरूबाट अनुदान परिचालन गराउनमा माबुहाङ नेतृत्वको सचिवालयले ऐतिहासिक फड्को मा-यो । यो सचिवालय वेलायती सरकारको द्विपक्षीय नियोग अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडि)को तर्फबाट ‘जनजाति सशक्तिकरण परियोजना’को नाममा करोडौँ रकमको परियोजना अनुमोदन गराउन सफल भयो ।
पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट महासंघको नेतृत्वमा डा. ओम गुरुङ चुनिए । गुरुङकै पालामा नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजाति समुदायको मानवीय विकासको सुचाङ्क र आर्थिक स्तरको आधारमा विभिन्न ५ समूह– लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तकृत, सुविधा वञ्चित र उन्नत समूहको रुपमा वर्गीकरण गरिए । जनजाति सशक्तिकरण परियोजनाअन्तर्गत करोडौँको आर्थिक सहयोग जुटेपछि साँघुरो छिँडीमा आश्रित महासंघ सचिवालय राम्रो भौतिक संरचनायुक्त कार्यालयमा परिणत भयो । महासंघ बैठक वा अन्य कुनै कार्यक्रममा पुग्नका लागि सार्वजनिक यातायात प्रयोगमा कमी आउँदै गयो । पदाधिकारीहरू प्राय रातो प्लेटको स्कोरपियो जीप (गाडी)मा हुइँकिन थाले । बैठकहरूमा एक कप चिया र बिस्कुटका लागि अ–आफ्नै गोजीबाट खर्चिएर धानिदै आएको संघीय परिषद्का सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूका लागि बैठक, कार्यक्रम आदिमा उपस्थित हुनका लागि यातायात खर्च र अन्य भत्ताको सुविधाको जोहो हुन थाल्यो । सचिवालयका अधिकांश पदाधिकारीहरूको विभिन्न लाभका पदमा स्तरोन्नति(?) हुन थाल्यो । ‘डिएफआइडि’बाहेक अरु अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट पनि आर्थिक सहयोग आउन थाल्यो । यस अर्थमा, महासंघको साधन, स्रोत, भौतिक तथा आर्थिक अवस्था सुध्रियो ।
मुलुकमा सात राजनीतिक दलहरूको संयुक्त पहलमा राजाको शाही शासनविरुद्ध सडक आन्दोलन चलिरहेको थियो । प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा महासंघको संलग्नता र भूमिका के कस्तो हुने भन्ने प्रश्न अहम् थियो । आदिवासी जनजातिहरू सात राजनीतिक दलद्वारा आह्वान गरिएको सडक आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्ने सवालमा महासंघभित्रै मत भिन्नता भयो । तथापि, राष्ट्रिय राजनीतिक प्रवाहमा महासंघले उठाउँदै आइरहेको मुद्दा स्थापित गराउने राम्रो अवसर भएको तथ्यसँग महासंघ अवगत थियो । त्यसैले आदिवासी जनजातिहरू त्यसबेलाको शाही शासनविरुद्धको सडक आन्दोलनमा सहभागी भए । आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिहरूको बाक्लो उपस्थिति रह्यो ।
पाँचौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र छवि राम्रो बनिसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको संरचनाभित्र विश्वका आदिवासी समुदायको आधिकारिक हैसियत स्थापित भइसकेको थियो । नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनको प्रतिनिधि संस्थाको पहिचान ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ नामले मात्र हुनु पर्याप्त होइन भन्ने ठहर्यायो। त्यसैले ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ नयाँ कलेवरमा ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ’मा बद्लियो ।
महासंघ आर्थिक स्रोत साधनले सवल त बन्यो । त्यसको कमजोर पक्ष पनि उत्तिकै देखा पर्दै गयो । जातीय संस्थाका प्रतिनिधिको रूपमा कार्यरत संघीय परिषद्का सदस्यहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा प्रभावित पार्ने गलत चलनको शुरुआत पनि त्यहीबेलादेखि हुन पुग्यो । महासंघभित्र र नेतृत्वहरूप्रति आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न पनि उठ्यो ।
दलीयकरणको तिक्त पाठ
महासंघको डेढ दशकको सांगठनिक यात्रा अग्रगामी नै रह्यो । संगठन विकास र विस्तारका लागि यो अवधि निकै महत्वपूर्ण रह्यो । नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायहरूको लामो समयदेखि संघर्ष, संकल्प तथा सामूहिक प्रयत्नबाट यस अवधिमा तीनवटा उपलब्धि हासिल भए ।
पहिलो, ठूलो त्याग, वलिदान र लामो समय खर्चिएपछि महासंघ र महासंघमा आबद्ध हुने थुप्रै जातीय संगठनहरू स्थापना भए । नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायको आधिकारिक साझा मञ्चका रूपमा महासंघले स्थायित्व प्राप्त गर्यो । यो पहिलो उपलब्धि थियो । दोस्रो, महासंघकै पहल र नेतृत्वबाट आदिवासी जनजाति विकास समिति हुँदै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन भयो । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ मार्फत् ५९ आदिवासी जनजातिहरूको सूचीकरण गरेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यले मान्यता दियो । तेस्रो, निरन्तर आन्दोलन र सङ्घर्षकै प्रतिफलस्वरुप नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको मुद्दा स्थापित भयो । राज्यलाई निर्वाचन, निजामति सेवा आदिमा समावेशीताको सिद्धान्त अपनाउन बाध्य बनाइयो । आरक्षणको प्रयोजनमा दलित, महिला, मधेशीको अतिरिक्त ‘आदिवासी जनजाति’ पनि एउटा प्रमुख क्लस्टरको रूपमा स्थापित भयो । अधिकार र समानुपातिक समावेशीताका दृष्टिकोणबाट यो अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
त्यसबाहेक आदिवासी जनजातिहरूमा बृद्धि भएको चेतना स्तर, सांगठनिक सुदृढीकरण, समुदाय–समुदायबीचको आपसी बुझाइ र समझदारीता पनि महत्वपूर्ण प्राप्ति हो । पहिचानसहितका स्वायत्त राज्यहरूको माग, ऐतिहासिक थातथलोमा स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि आत्मनिर्णयको अधिकार आदि सवालमा आदिवासी समुदायहरूका क्रियाशीलता ऐतिहासिक नै रह्यो । यस सन्दर्भमा महासंघको नेतृत्वकै पहलमा संविधान सभाभित्र आदिवासी सभासद्हरूको दबाब समूह ‘ककस’ समेत निर्माण हुन सक्नु कम महत्वको कुरा थिएन ।२०६२/६३ पछि खासगरी पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिका सवाल प्राथमिकतामा थियो ।
तर, दोस्रो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरूले तिक्तता भोगे । आदिवासी जनजातिहरूले संगठनात्मक रूपमा प्रभावकारी भूमिका पनि खेल्न सकेनन् । पहिचानसहितको १४ वा १०ं१ संघीय राज्यहरूको खाकालाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न, गराउन खेल्नुपर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका सन्तोषजनक समेत रहेन । इतिहासको निर्णायक क्षणमा महासंघको भूमिका फितलो बन्यो ।
महासंघको छैठौँ महाधिवेशनले महासंघको संरचनालाई फेरबदल गरेर महासचिवको नेतृत्वको सट्टा अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्यो । त्यही समयदेखि महासंघमा राजनीतिक दलहरूको नाङ्गो हस्तक्षेप शुरु भयो । महाधिवेशनमार्फत् नेतृत्व चयनदेखि आन्तरिक मामिला र सचिवालय सञ्चालनमा समेत दलीय प्रभाव हावी भयो । महासंघ क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । दलीयकरणको दवाव र प्रभाव बढ्दै गयो । महासंघको पाँचौँ महाधिवेशनले आदिवासी जनजातिभित्र रहेको फरक–फरक आर्थिक र सामाजिक अवस्थाका आधारमा उनीहरू केन्द्रित योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अभिप्रायले सूचीकृत समुदायहरूको पाँच विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो ।
दलीय राजनीतिको प्रभाव बढ्दै जाँदा त्यही वर्गीकरणलाई महासंघको महाधिवेशनको बखत निर्वाचनको रणभूमिमा साना जनसङ्ख्या र ठूलो जनसङ्ख्या भएका समुदाय, हिमाली समुदाय वा तराइ–मधेसी समुदायका रूपमा खण्डित गर्ने आधार बन्यो । र यिनै समुदायहरूलाई आपसमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा खडा गरिए । दलीय स्वार्थ र दबाबको घेराभित्र महासंघ र जनजाति आन्दोलनका नेतृत्वहरू बाँधिए । आदिवासी जनजाति नेतृत्वबीच फितलो बन्दै गएको एकता झन् कमजोर बन्यो । त्यसले एकीकृत सांगठनिक पहलमा ह्रास ल्यायो । दलीय स्वार्थ र दबाबबाट मुक्त हुन नसक्दा प्राप्ति पनि अपेक्षित हुन सकेन ।
आठौँ महाविधेशनसम्म आइपुग्दा महासंघले दलीयकरणको पराकाष्ठा भोग्यो । महासंघका नेतृत्व पंक्तिहरू आदिवासी जनजातिका मुद्दाप्रति भन्दा दलको ह्वीप र सिद्धान्तप्रति उत्तरदायी बन्न पुगे । परिणामस्वरुप दोस्रो संविधानसभामा निर्णायक भूमिकामा उभिनुपर्ने समयमा दलीय ह्विपको प्रकोपमा परेर आन्दोलनको नेतृत्वलाई भुत्ते तुल्याइयो । आन्दोलन हाँक्ने संगठन फितलो भयो । तथापि, यस्तो अवस्थामा पनि आदिवासी जनजाति महासंघ र जनजाति आन्दोलनले थुप्रै सङ्घर्षका क्रियाकलापहरू ग¥यो । २०६९ जेठ ७, ८ र ९ गते अभूतपूर्व नेपाल बन्द सफल पा-यो । जसका कारण भिन्न–भिन्न परिवेशमा आदिवासी जनजाति समुदाय र संघ–संगठनहरूसँग अनेकन सहमति, सम्झौता गर्न राज्य बाध्य भयो ।
-आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा निरन्तर क्रियाशील महासंघका संस्थापक सदस्य तथा मानवअधिकारवादी नेता मल्ल महासंघको सल्लाहकार सदस्य हुन् ।
नोटः गोबिन्द छन्त्याल र सुखवीर थामीद्वारा सम्पादित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘आदिवासी प्रतिवादः महासंघ, सरोकार र आन्दोलन’ मा छापिने आलेख हो ,यो ।